नेपाल आज | सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो किन निभेन ?
सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो किन निभेन ?
बिहिबार, ३० जेठ २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज(PO)
खडेरी वा सुख्खा याममा धेर आगलागी हुने गर्दछ । आगलागी फैलन हावाहुरीले असाध्यै धेरै सहयोग गर्दछ । हाम्रोमा आगलागी हुने प्रायः सवै कारण मानविय त्रुटी हुन् भन्दा कुनै फरक पर्दैन । वन क्षेत्रमा पनि आगलागीका कारण धेरै ठुलो विनास हुने गरेको छ । वनमा लागेको डढेलोको कारण अरवौं क्षति भैरहेको छ ।
पछिल्लो एक दशकको लेखाजोखा गर्ने हो भने सन् २०१७ र सन् २०१३ मा मात्र वन डढेलोवाट कुनै नेपालीको ज्यान गुमेन नत्र हरेक वर्ष मानविय क्षति भैरहेको छ । यस वर्षको सुख्खा याममा पनि ३ जनाले वन डढेलोबाट ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
पछिल्लो अवधीमा सामुदायिक वनमा आगो लाग्ने क्रम वढेको छ । विगतमा पनि आगो लाग्ने गरेको थियो तर आगो निभाइन्थ्यो । पछिल्ला केही वर्ष यता आगो लाग्यो तर निभेन वा निभ्याइएन । सामुदायिक वनको अवधारणा विकास गर्दाका वर्षहरुमा अहिले भन्दा धेरै डढेलो लाग्ने गरेको थियो । त्यती वेलामा अहिलेको जस्तो चेतना स्तर पनि थिएन ।
सामुदायिक वनको कारणले गाईवस्तु चराउन नपाएको झोक फेर्न वनमा आगो लगाउँथे । त्यती बेला आगो लगाएमा घाँस राम्रो आउँछ भन्ने सोच पनि थियो । त्यसैले धेरै ठाउँमा आगो लाग्थ्यो तर सामुदायिक वनका अभियन्ता उपभोक्ताहरु आगो लाग्नासाथ दौडेर ज्यानको पर्वाह नगरी आगो निभाउँथ्ये ।
सामुदायिक वनको अवधारणा विकास गर्दाको समयको तुलनामा अहिलेको चेतना स्तर फेरिएको छ । आगो लगाउने काम दण्डनिय हो भन्ने धेरैलाई थाहा छ । वनमा आगो लगाएर कसैलाई फाइदा छैन भन्ने प्रायः सवैले वुझेका छन् । आगो लगाउने पहिला जस्तो धेरै छैनन् । केही सिमित अपराधिक सोच भएकाहरुले आगो लगाउँछन् ।
पहिला जस्तो एक जंगलमा चारै तिरवाट आगो लाग्दैन । अहिले एक ठाउँवाट आगो लागेको छ त्यो फैलिएर चारै तिर पुगेको हो । पहिला आगो लाग्नासाथ निभाउन पुग्थ्ये तर अहिले निभाउन जाने कोही भएन । पहिला वन विना ग्रामिण जनजीवन कल्पना गर्न पनि सकिन्नथ्यो । अहिले त्यो अवस्था छैन । सामुदायिक वन माथिको निर्भरता फेरिएको छ ।
पहिला दाउरा घाँसको लागि वन चाहिन्थ्यो आगो लागेमा त्यो नष्ट हुन्थ्यो । अहिले अधिकांश सामुदायिक वनवाट दाउरा घाँस ल्याउन छाडिएको छ । त्यो भन्दा वढि वनवाट उपलव्धी लिन सकिएको छैन ।
सामुदायिक वनको अवधारणाले वन क्षेत्र वढ्यो, वनको हैसियतमा व्यापक सुधार आयो, केही उपभोक्ताको अवस्थामा पनि सुधार आयो होला । सामुदायिक वनबाट दाउरा घाँस केहीमा सिमित काठ वाहेक केही प्रत्यक्ष लाभ पाउन सकेनन् ।
अधिकांश उपभोक्तालाई दाउरा घाँस अव चाहिएन । सामुदायिक वनवाट के उपलव्धी हासिल गर्ने ? यो प्रश्नको उत्तर पाउन नसक्दा सामुदायिक वनमा लागेको आगो निभेन । अहिलेकैं अवस्थामा सामुदायिक वन सञ्चालन गरिरहने हो भने वनमा लागेको आगो घट्दैन अझ विस्तार हुँदै जाने संभावना देखिन्छ ।
सामुदायिक वनको अभियानले वन संरक्षणमा अत्याधिक सफलता हाता प-यो । वन जोगाउँदा पछि फाइदा पाइएला भनेर जोगाएका थिए तर अहिले प्रतिफल लिन सकेनन् । त्यसैले वनका उपभोक्ता आगो लगाउन त गएनन् तर कोही फटाहाले वा मानविय त्रृटीले वनमा आगो लाग्दा निभाउन पनि गएनन् ।
अघिल्लो पुस्ताले संरक्षण गरेर वन स्रोतको उपलव्धता वढाइदियो । अवको पुस्ताले दिगो तरिकाले उपयोग गरि उपलव्धी लिन सक्नु पर्दछ । जुन सामुदायिक वनमा जे संभावना छ त्यही काम गर्ने वातावरण तयार गर्नु पर्दछ । सामुदायिक वनलाई व्यवसायीक वनाउनु पर्दछ । सामुदायिक वनको नयाँ गन्तव्य निर्धारण गरिनु पर्दछ । त्यो गन्तव्य राज्यले लिएको “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” भन्ने अवधारणालाई सहयोग पुग्ने हुनु पर्दछ ।
त्यसका लागि वनको दिगो व्यवस्थापन र व्यवसायीक सदुपयोग नैं हो । तर यस मार्गमा वन क्षेत्रका कुनै पनि खेलाडी निकायहरु क्रियाशिल भएको देखिन्न । स्थानीय तह वनसँगको नजिकको सरकार हो । अधिकांस स्थानीय सरकारहरु वन क्षेत्र नैं मास्ने मुडमा देखिएका छन् । कुनै पनि स्थानीय तहले वन सम्वन्धी स्थानीय कानून वनाएका छैनन् ।
उनीहरुमा सामुदायिक वनको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरी समृद्धिको मार्गमा हिडाउने चासो देखिन्न । जताततै सामुदायिक वन भएर विकास निर्माण गर्न पाइएन भन्ने गुनासो रुपी चिन्ता देखिन्छ । समुदायको भुमिकालाई झन्झटिलो प्रकृयाको रुपमा हेरियो । समुदायको संलग्नताले स्थानीय सरकारले गर्ने विकासको तागत थप्छ भनेर स्वीकार गरिएन । विगतमा सामुदायिक वनको अवधारणा विकास गर्दा दातृ निकायहरु धेरै थिए ।
उनीहरुको सामुदायिक वन विकासमा प्रत्यक्ष सहयोग तथा सहकार्य थियो । अहिले नेपालको वन क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्र वनाएका कुनै पनि दाता देशहरु छैनन् । नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा सामुदायिक वन हटेको धेरै भैसक्यो । भरखरै प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक वन भन्ने शव्दावली समेत अट्न सकेन ।
सामुदायिक वनको अवधारणा सुरु हुँदा सामुदायिक वनमा सहयोग गरे वापत वन कर्मचारीको वृति विकासका लागि अध्ययन, अवलोकन, वैदेशिक भ्रमण जस्ता आकर्षणहरु थिए । ती सुन्य भैसकेको धेरै वर्ष भैसक्यो । वन क्षेत्रको नागरिक संगठनहरु मणी हराएको नागजस्तै भैसकेको छन् । प्रतिक्रिया जनाउने भन्दा माथि उठेर रचनात्मक हुन सकेको छैनन् ।
अधिकांश सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले वन कार्ययोजना परिमार्जन गर्न चाहाना राख्दैनन् । किनकी वन कार्ययोजना हुँदा र नहुँदामा केही फरक पर्दो रहेनछ । दाउरा घाँस आवश्यक नपर्ने त्यो भन्दा वढि सामुदायिक वनबाट उपलव्धी नहुने भए पछि कार्ययोजना किन चाहियो भन्ने प्रतिप्रश्न गर्न थालिसकेका छन् । काठ तथा वहुमुल्य वन पैदावर निकासि गर्ने सामुदायिक वनहरुले मात्र कार्ययोजना वनाउनमा जाँगर देखाउने गरेको पाइन्छ ।
सामुदायिक वनसँग वन स्रोत तथा आर्थिक स्रोत समेत निष्कृय भैरहेको छ । केही वर्ष अघिको एक अध्ययनले प्रभावकारी वन व्यवस्थापन मात्र गर्दा पनि प्रति हेक्टर १ जना मान्छेलाई नियमित रोजगार दिन सक्छ भन्ने देखाएको छ । नेपालमा सामुदायिक वन मात्रै पनि २२ लाख हेक्टर भन्दा वढि छ ।
२२ लाख जनालाई प्रत्यक्ष र नियमित रोजगार दिन सक्नु पर्ने हो । एक हेक्टर कृषि जमिनमा व्यवसायीक काम गर्दा कति रोजगारी दिन सकिन्छ वनमा त्यती नसकेता पनि त्यसको आधा मात्र भने सक्नु पर्ने हो ।
शहर आसपासका सामुदायिक वनमा पर्यपर्यटन, अन्य सामुदायिक वनमा व्यवसायीक खेती (कानून त वहुवर्षिय बाली लगाउन मिल्छ) गर्ने, कानून वन्देज नगरेका व्यावसायिक पालन गर्न सकिने वन्यजन्तु पालन जस्ता काम गरेर सामुदायिक वन क्षेत्रको वहुआयमिक उपयोगमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।
सामुदायिक वनको वहुउपयोग गरेर फाइदा लिन सक्ने अवस्था आएमा डढेलो निभाउन उपभोक्ता जालान् । हैन भने आगो धेरै स्थानवाट नलाग्ला तर लागेको आगो निभाउन उपभोक्ताले जाँगर देखाउँदैनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बढ्दो साख
एनआरएनए चुनावमा कसको मत कति ?
प्रदेशले संवैधानिक प्रावधान विपरीत बनाएको कानून खारेज
उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश शाही बर्खास्त!